Kisaaraa dhukuba koovid-19 ittisuuf.. – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Baroota addaa addaatti dhukubooni dhala nama safisaaf baayinaan ajjeesaa turan akkumma gosotaaf amala isaaniti lubbuu baayyee dabarsaniruu, kaanimoo gaagahumsa guddaa kessa galchaniiru. Isaan kessaas warreen akka (black death), (Spanish flu),(HIV AIDS),(Ebola) fi kan biroon akka seenatti kan yaadatamaniif harras kan sodaatamandha. Ani ogessa teekinoolojiti waayee qoranaa dhukubaafi fayyaa irratti sana kana jechuuf beekumsa isaa hin qabu, hatahuu malee teekinoloojiti haala ittin dhima baanee carraa dhukuba yeroo ammaa lubbuu hedduu galafateef qorichaaf talaalin hin argmneef kana irraa of-fageessuu dandeenyuu irrattiin yaada isinii kennuu barbaada.
Dhukubni koovid-19 xiqqoo kaanirraa kan adda isa godhu sa’aati 72 sibiila, pilaastika addaa addaa irraa turuu dandahuu isaati. koovid-19 gosoota dhukubaa vayirasiin dhufaniif kallattiin sirna hargansuu gaagahuun lubbuu dabarsuu dandaaha. Kanaan walqabatees dhaabati fayyaa adunyaa WHO harkaan walqabuun, walitti siqanii bakka tokko taahuun dhukuba kana namaa namatti salphati dabarsuu dandaaha jedhameera, kana karaa baayyee dhageessanitu.
Teekinoolojitti akkamiti dhima baanee mana teenyee tajaajila barbaanu argachuu dandeenya ?
Bilbila harkaa keenyatti fayyadamuun herrega bankii keenyaa tochoosuu ni dandeenya, bankootnii dhunfaas mootumaas biyyaa keenya keessatti argaman hundumaa jechuu ni dandeenya tajaajila kana ni kennuu. Mobaayiil baankiingiin maal gochuu nu dandeesisaree ?
Haftee heregaa keenya ilaalu
Kaffaltii addaa addaa kallatiin kaffalu
Kaardii mobaayilaa gutachuu
Nama biraaf qarshii dabarsuu
Kaffaltii interneeti ji’aa kafaluu fi kan biro
Tajaaajili kun baankii qaaman deemuun argannu hambisna, baasii rawwannu hundumaa mana teenyee raawwachuu ni dandeenya.
Interneetidhan hoji mana teenyee hojechuu
Interneetin hara hojii baayyee salpiseera bakka addaa addaa teenyee hojii tokko salphaatti hojechuu nu dandeesiseera manuma teenyee yoo kanallee mijeefannee hojii qaamaa wajira deemne hojennu hambisu dandeenya.
yaadota bu’a qabeessa taahan kan biroo yeroo biraattin qindessee isinii maxxansa.